किन राखियो आकाशै ढाकिने गरी सुनधारा मार्गमा छातै छाता?
छाताले आकाशै ढाकेर खेलसंगै आन्तरिक पर्यटनलाई बढवा दिने प्रयासको शुरुवात् गरेका छौं : सङ्कटा क्लबका सचिव आशिष मान सिंह
गोठालो खबर -३ २०७७ पुस ९, बिहीबार,११:२४:PM
काठमाडौ, ०९ पुष। कोभिड—१९ को कारण थिलथिलो परेको सुन्धारा मार्गको बजारलाई पुनर्जीवन दिन लागि परेको छ सङ्कटा क्लब । कोरोना भाइरस महामारीको असरले सुनसान रहेको यो बजार यति बेला मानिसको भिडभाड, फोटो र सेल्फी खिच्नेको जमात साथै रमिता हेर्नेको भिडले बाटो पाई नसक्नु भएको छ यो बजार । आकशै ढाकिने गरी राखिएको छातै छाताको कारण धेरैलाई उत्सुकता जागेको छ । यसरी छातै छाताले सिँगारिएको बजार देख्दा मानिसहरू अचम्म मान्दै प्रश्नहरू सोध्नेको जमात पनि कम छैन । गाडी हुइँकिने सडक गाडी दौडाउनको त कुरै छाडौँ, सहज तरिकाले मानिस हिँड्न सक्ने स्थिति छैन यो स्थान । त्यसो भए किन राखियो त यसरी आकाशै ढाकिने गरी छाता ?
चाइनाबाट सुरु भएको कोरोना भाईरस कोभिडि—१९ ले विश्वमा आतङ्क मच्चाउँदै नेपाललाई पनि अछुतो छोडेन । नेपालको केन्द्रीय राजधानी पनि पछिल्लो चरणमा कोभिड—१९ को हटस्पट नै बन्न पुग्यो । यस महामारीको कारण कतिको रोजगारी गुम्यो, सुन्दर सपना तुनेर राजधानीमा बसेका कयौँको उठिबास नै लाग्यो भने उद्योग धन्दा, कलकारखाना तथा बन्द व्यापार चौपट भयो । अहिले यो सङ्कटबाट पार पाउन कतिले मरितरी घिसृएर आफ्नो अस्तित्व बचाउन लागि परेका छन् । यसको असर सुन्धारा मार्गको व्यवसायीले भोग्नु नपर्ने कुरै भएन ।
कथा हो छाताको । व्यथा हो राजधानीको मुटु सुन्धारा मार्गको । अनि कथा हो सङ्कटा क्लब अभियानको । फुटबल जगतको अब्बल क्लब मध्य एक क्लब हो सङ्कटा । खेल क्षेत्रलाई देशलाई नै अन्य मुलुकसंग चिनाउने र नेपालको नाम उच्च राख्ने उद्देश्यको साथ अगाडी बढेको यो क्लबले सुन्धारा मार्गको सङ्कट हटाउन लागि परेको छ यति बेला । २००८ सालमा स्थापना भई फुटबल खेलाई विकास गर्दै अब्बल र सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्ने र यस खेल क्षेत्रमा खरो प्रतिस्पर्धी बन्ने सपना बोकेका यो क्लब पनि कोभिड—१९ को कारण अन्य क्षेत्र झैँ सुस्ताएको थियो । खेल क्षेत्रलाई मात्र नभएर यो क्लबले जनसरोकार र सामाजिक कार्यहरु पनि गर्दै आई रहेको छ । यस क्लबले महलहरुमा मात्र देखिएको झिलिमिली सडकमा पनि सम्भव भएको नमुना देखाउन पनि पोलहरूमा झिलिमिली बत्ति राखेको र रुख बिरुवा नभएको ठाउँहरूमा समेत रुखको आभास दिलाउन गमलामै भए पनि बिरुवाहरू राखेको सङ्कटाका सचिव आशिष् मान सिंहले बताउछन।
आफ्नो अस्तित्व धान्न र क्लबको दैनिक खर्च धान्न नेपाल वायुसेवा निगमसंग सटरहरू लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । आफूले जिम्मेवारी पाएको यो बजारलाई पनि कोरोना महामारीले गर्दा व्यावसयीहरुले भाडा नै तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेपछि यो क्लबले बजार लाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन उपाय खोजेको छ । चिया गफ मै स्थानीय साथीभाइ, क्लबका सदस्यहरू र व्यावसायीहरुसंग यस ठाउँमा छाता राख्ने नयाँ अबधारणा आएको सङ्कटा क्लबका सचिव आशिष मान् सिंहले गोठालो खबरलाई बताए । अहिले यो ठाउँमा चार सय भन्दा बढी छाताहरू राखिएको उनले बताए । स्थानीय व्यापारी, साथीभाइ, शुभचिन्तक र स्थानीयहरूको सहयोगमा यो कार्य सम्भव भएको उनी बताउँछन् ।
कोभिड—१९ को महामारी अगाडी यस क्षेत्रको व्यावसायहरु राम्ररी नै चलेको थियो । तर यो महामारीसंगै यहाँका बजारलाई पनि नराम्ररी असर पारेको आशिष मान बताउँछन् । अन्य समयमा खचाखच मानिसको भिडले भरिने बजार कोभिड—१९ महामारी कै कारण सुनसान भएको उनले बताए । यो परिस्थितिबाट पार पाउन उपाय स्वरूप र आन्तरिक पर्यटनलाई समेत बढवा दिन छाता राख्ने निर्णय गरिएको उनी बताउँछन् ।
सुन्धारा मार्गमा छातै छाताले ढाकिए पछि गत शनिवार सम्म दैनिक २० हजारको संख्याले अवलोकन गरेका र अहिले दैनिक १० हजारको संख्यामा यस ठाउँमा अवलोकन गर्ने गरेको सचिव सिंह बताउँछन् । अहिले व्यापार व्यवसाय मात्र हैन, आन्तरिक पर्यटन समेत बढेको बताए । यस बजारलाई पुनर्जीवन दिनको लागि यो रचनात्मक कार्य गरेको सिंहको भनाई रहेको छ ।
लामो इतिहास बोकेको सङ्कटा क्लबले खेल जगतमा त योगदान पु¥याएकै छ, हाल आएर यस क्लबले सामाजिक कार्यहरूमा समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । लामो समय सम्म कोरोना भईरस महामारीको कारण बहालमा व्यवसाय गर्ने व्यावसायीहरु लाई भाडा नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा ल्याएको कारण यो रचनात्मक कार्यले सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको सचिव सिंहको भनाई रहेको छ ।
राज्यबाट कुनै सहयोग नपाएको यो क्लबले आफ्नै बलबुतामा अहिलेको अवस्थामा आई पुगेको आशिष मानको भनाई रहेको छ । तर विगत २ वर्षबाट भने यो क्लबले महानगरको तर्फबाट नगद र जिन्सी सहयोग पाउँदै आएको जानकारी गराए । राज्य संवेदनशील बनी यस्ता क्लबहरूको विकास र प्रवर्धनमा लाग्नु पर्ने उनको तर्क रहेको छ । आउने दिनमा राज्यको सहयोग पाए अझ राम्रो नतिजा ल्याउने र देशकै नाम उच्चो राख्न सकिने उनको भनाई रहेको छ । आज सुन्धारा मार्गमा छाताले आकाशै ढाकेर खेलसंगै आन्तरिक पर्यटनलाई बढवा दिने प्रयासको शुरुवात् गरेको उनी बताउँछन् ।